Dakar: Zaikabe sôsialy afrikàna faha-7 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Janoary 2020 6:12 GMT
Zaikabe sôsialy afrikàna (FSA) faha-7 ny 15 hatramin'ny 19 Oktôbra 2014, Dakar, renivohitra senegaly. Mpandray anjara avy aminà firenena 30 no hiresaka manodidina ny lohahevitra “krizy, ady ary fitsabahana ara-tafika ataon'ny vahiny mba hifehezana ny loharanonkarena : toy inona no mba asetrin'ireo hetsika sôsialy afrikàna izany?” .
Moussa CAMARA no nanoratra tao amin'ny tranonkala journaldumali.com:
Ny faneken'ny vahoaka ny famindràna toerana an-tery ao anatiny ihany na ivelan'i Afrika no naterak'ireo foibenà toedraharaha mafampàna tetsy sy eroa. Tanatin'io endri-javatra io i Eoropa no nandeha tsikelikely nanitatra ny fitaovany antsoina hoe « FRONTEX » natao ho fanarahana maso ny fitosak'ireo mpifindra monina, ka tanjony tamin'izany ny hanidiana ny sisintaniny, indraindray amin'ny fanitsakitsahana tsotra izao ny zon'ireo mpifindra monina sy ireo olona nafindra toerana.
Io dingana ikendrena hametrahana “Eoropa mimànda” amin'ny fomba rehetra io dia mitranga ao anaty endri-javatra iray manamafy ny olana (krizy) ara-drafitry ny kapitalisma, izay tena voamarik'ireo krizy amin'ny sehatra marolafy, toy ny olan'ny angovo, sakafo, toetrandro, sôsialy, ara-bola, ny maripamantarana (identitaire) ary ara-kolontsaina. Izany no manazava ny hoe ny olan'ny kapitalisma misy amin'izao fotoana izao dia ampitoviana amin'ny “olan'ny sivilizasiôna”. Ary io olana io dia mamoha varavarana ho an'ireo endrika rehetran'ny fandraisana an-tendro sy ny tabataba, mampitombo araka izany ny antom-pisian'ireo fitsingilahilàna, indrindra any amin'ireo firenena marefo indrindra, toy ireo firenena afrikàna. Mamotika araka izany ny ezaka rehetra ho fampandrosoana ary mamorona fepetra ahafahan'ireo hery mpanjakazaka maka ireo loharanonkarena voajanahary sy ny haren'ireo firenena tatsimo.